Real Madrid Oo Barbaro Niyadjab Leh Kala Soo Laabtay Kooxda Leganes, Xusuustii Ugu Xumayd Ee Zidane Ee Waayihiisa Madrid Oo Wali Sii Jiri Doonta. - GOOL24.NET
Real Madrid Oo Barbaro Niyadjab Leh Kala Soo Laabtay Kooxda Leganes, Xusuustii Ugu Xumayd Ee Zidane Ee Waayihiisa Madrid Oo Wali Sii Jiri Doonta.
Real Madrid ayaa barbaro niyadjab jableh la soo gashay kooxda yar ee Leganes iyada oo waliba Los Blancos ahayd kooxda soo laabashada ku samaysay si ay barbaro ugu qabto Leganes oo gool kaga hor martay. Zidane ayaa wali tijaabinaya ciyaartoyda kooxdiisa maadaama oo ayna jirin waxay u tartamayaan waxayna u muuqataa in xidigo badani ay suuqa iska xaraashayaan.
Real Madrid ayaa la kulmaysa rekoodhkii ugu liitay ee horyaalka La liga ee sanado badan iyada oo markale awoodi wayday in ay saddexda dhibcood soo hesho. Karim Benzema ayaa markale awooday in uu kooxdiisa Rela Madrid badbaadiyo maadaama oo uu dhaliyay goolkii barbaraha ay ee ay ciyaarta ugu soo laabteen.
Inta badan qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ahayd mid ay labada kooxood isku mari waayeen laakiin kooxda Leganes ayaa dhamaadkii qaybtii hore awooday in ay gool ku hor martay. Real Madrid ayaa min bilawgii qaybtii hore ilaa inta ugu badan ahayd kooxda gacanta sare lahayd laakiin waxay awoodi wayday in ay qaybtii hore wax goolal ah dhaliso.
Marco Asensio ayaa u baahnaa in uu garaaco goolhaye Cuellar oo kaliya si uu goolka furitaanka u dhaliyo bilawgii ciyaartaba laakiin dadaal kasta oo ay Madrid samaysay qaybtii hore waxa uu ahaa mid aan guulaysan.
Daqiiqadii 45 aad ee dhamaadkii qaybtii hore ee ciyaarta ayay kooxda martida loo ahaa ee Leganes heshay goolka furitaanka kadib markii uu J. Silva u saxiixay goolka uu caawintiisa ka helay M. Braithwaite waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Leganes is mari waagii ku jabisay.
Laakiin xidiga caawinta goolka Leganes sameeyay ee M. Braithwaite ayaa awoodi kari waayay in uu dhamaystiro kubbada laba yards oo kaliya u jirtay goolka Real Madrid oo uu gool cadaan ah ku dhalin lahaa.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay Leganes hogaanka ciyaarta ku haysay laakiin markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta Karim Benzema ayaa halkiisa ka sii waday in uu badbaadiyo kooxdiisa isaga oo daqiiqadii 51 aad dhaliyay goolka ay Madrid barbaraha ku keensatay.
Daqiiqadii 77 aad markii ay ciyarta waxba iska badali waayeen ayuu Zidane kaydka ka soo kiciyay Lucas Vázquez wuxuuna saaray Isco iyada oo labada kooxood dagaal ugu jiray goola labaad sidii ay ku keensan lahaayeen.
Xaalada ayaan wax isbadal ah yeelan wuxuuna Zidane ciyaarta soo galiyay Gareth Bale isaga oo saaray Marco Asensio oo hawshii loo xil saaray aan ka soo bixin waxaana la galay 9 kii daqiiqo ee ciyaarta ugu danbeeyay.
Daqiiqadii 84 aad Leganes ayaa gool keensatay kadib markii uu En-Nesyri shabaqa ka soo taabtay Navas laakiin goolkan ayaa ofside ahaan loo diiday hal daqiiqo kadib Marcelo ayaa gool badbaadin cajiib ah ku qasbay goolhayaha Leganes.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbaro 1-1 ah iyada oo Real Madrid awoodi kari wayday in ay guul ka soo gaadho kooxda yar ee Leganes waxayna kooxda Leganes soo kicisay xusuustii xumayd ee uu Zidane kaga baxay Real Madrid xili ciyaareedkii hore markii ay Copa Del Rey kaga reebtay Bernabeu.